१२ वर्ष अगाडी भाडाको एउटा कोठामा बस्ने नेहा अहिले बलिउडकी चर्चित गायिका बस्छिन यस्तो भब्य महल मा, भा’वुक हुदै लेखिन यस्तो……(हेर्नुहोस पुरा विवरण) – Online Nepal
March 13, 2020 953
नेहाले नयाँ घरको दुई तस्विर शेयर गरेकी छन् । यी तस्विरलाई शेयर गर्दै नेहाले आफ्नो १२ वर्षको सं’घर्षको कहानी बताएकीछन् । नेहा कक्कड सिनेमा जगतमा आउनुभन्दा पहिला एक कोठामा भाडामा बस्थिन् ।नेहा कक्कड सिनेमा जगतमा आउनुभन्दा पहिला एक कोठामा भाडामा बस्थिन् ।
त्यस घरमा हामी कक्कड परिवार एउटा कोठामा बस्थ्यौ । त्यहाँ मेरी आमाले एक टेबल राखेकी थिइन, जुन हाम्रो किचेन थियो । त्यो घर हाम्रो आफ्नै थिएन । हामीले भाडा तिर्थ्यौ । अहिले जब म एउबटै शहरमा मेरो आफ्नै यस बंगलालाई देख्छु तब म सधैँ भा’वुक हुन्छु ।कमै मान्छेलाई यो थाहा छ कि सिनेमा जगतमा आउनुभन्दा पहिला नेहा र उनको दिदि र दाई भजन गाउथे ।
Prevझुक्किएर पनि यस्ता युवती विहे नगर्नुहोस्, नत्र जिन्दगीभर पछुताउनु पर्ला
Nextतपाईंलाई रुघा, मर्की वा कोरोना भाइरस के लागेको हो? कसरी थाहा पाउने?
यस्तो गम्भीर प्रकरणमा संलग्न १२ जना मोरङबाट समातिए